Ziyintoni Izinto Zokugwaza?
Izilwanyana kunye Nendalo Iimpawu zeNyaniso kunye neAphids
Into Omele Uyazi Ngokuzibamba Ngezigulane kunye neChagas Disease
"Qaphela ukukhwaza izibhugi!" Izihloko zeendaba zakutsha zivakalisa ukuba inambuzane ezibulalayo zihlasela i-US, iyala abantu ababi. Ezi ntloko ezikhohlisayo zabelwana ngokubanzi kumajelo asekuhlaleni, kwaye amasebe ezempilo kuwo wonke ama-United States ahanjiswe ngeefowuni kunye ne-imeyile evela kubantu abachaphazelekayo.
Ngaphambi kokuba ukwesaba, nantsi iinyaniso ofuna ukuba wazi malunga nokugula kwee-buggs ne-Chagas .
Ukukhwabanisa izigulane zi-buggs zangempela kwintsapho yegciwane lokubulala ( Reduviidae ), kodwa ungavumeli ukuba kuthumele. Lo myalelo wezinambuzane, i- Hemiptera , uquka yonke into esuka kuma-aphid ukuya kumaqabunga, onke aphengulayo, atshaya umlomo. Kulo myalelo omkhulu, iibhugi zokubulala ziyinxalenye encinci yezilwanyana ezinobuncwane kunye nezinambuzane ezinama-parasitic, ezinye zazo zisebenzisa ubuchule obuqilileyo kunye nobuchule bokubamba nokutya ezinye iinambuzane .
Intsapho yeebhugi ezibulalayo iyahlukana ngokuphindaphindiweyo ibe yintsapho, enye yazo i-Triatomina ye-subfamily-bugs ebomanga. Ziyaziwa ngeendidi zamagama, ezibandakanya "i-bloodsucking conenoses" echaphazelekayo. Nangona bengaboni nto efana nabo, i-triatomine bugs ihlobene nezimbambulu (nakwi-Hemiptera) kunye nokwabelana ngegazi labo. Izibungulu ze-Triatomine zondla kwigazi leentaka, izilwanyana ezinwabuzelayo, kunye nezilwanyana ezincelisayo, kuquka abantu. Bakhulula ngokuhlwa ebusuku, kwaye bakhangwa kwizibane ebusuku.
Iibhugi ze-Triatomine zenza isiteketiso sokuqhayisa izibilini ngenxa yokuba zijwayele ukuluma abantu ngobuso, ngokukodwa emlonyeni . Ukukhwabanisa iibhugi zikhokelwa ngephunga le-carbon dioxide esiyikhuphayo, ekhokelela ebusweni bethu. Kwaye ngenxa yokuba badla ebusuku, bathambekele ukusifumana xa silele embhedeni, ngobuso bethu bubonakala ngaphandle kwembhedlele yethu.
Iimpawu zeBanging zibangelwa njani izifo zeChagas?
Ukugaya izibilini akubangeli imbande yeChagas, kodwa ezinye izibungu zokubanga ziphethe i-protozoan parasite kwizifo zazo ezihambisa isifo seCasgas . I-parasite, i- Trypanosoma cruzi , ayidluliswanga xa igciwane elimangalayo likubetha. Ayikho emxeni we-kiss, kwaye ayifakwe kwisilonda sokuluma ngelixa i-bug isela igazi lakho.
Kunoko, ngelixa usondla ngegazi lakho, ibhokhwe yokumanga isenokuthi ihlasele esikhwameni sakho, kwaye loo mveliso ingaba ne-parasite. Ukuba uqala ukuluma okanye ukuhlutha indawo leyo yesikhumba sakho, unokuhambisa i-parasite kwilonda elivulekileyo. I-parasite inokungena emzimbeni wakho ngezinye iindlela, njengokuthi uthinte isikhumba sakho uze uphese iso lakho.
Umntu osuleleka kwi- T. cruzi i- parasite unokudlulisela abanye isifo seCasgas, kodwa kuphela kwiindlela ezincinci. Ayikwazi ukusasazeka ngoqhagamshelwano oluqhelekileyo. Ngokuya kumaziko okuLawula nokuLawula (i-CDC), inokudluliselwa kumama ukuya kwintsana ebandleni, kunye nokunyelwa igazi okanye ukufakelwa komzimba.
Udokotela waseBrazil, uCarlos Chagas, wathola isifo seChagas ngo-1909. Esi sifo sabizwa nangokuthi i-American trypanosomiasis.
Uphi Iimbhobho Zokuqhawula Zihlala?
Ngokuchasene neentloko ozibonayo, ukuxaka ama-buggs akulona matsha kwi-US, kwaye ayingena eMntla Melika . Phantse zonke iindidi ezili-120 zokuzibanda zihlala eMelika, kwaye ezi ziintlobo ezili-12 ze-kissing bugs zihlala ngasenyakatho yeMexico. Ukukhangela izibhugi ziye zahlala apha iminyaka eyiwaka, ngaphambi kokuba i-US ibe khona, kwaye isungulwe kuma-28 athi. E-US, iibhugi zokubanga zizininzi kwaye zihlukeneyo eTexas, eNew Mexico nase-Arizona.
Ngaphandle kweendawo apho ziyaziwa khona izibhugi zokubamba, abantu bahlala bengabonakali ukukhwaza amabhugi kwaye bakholelwa ukuba baqhelekile kunokuba basenjalo. Abaphandi abaqhuba iprojekthi yenzululwazi yenzululwazi yaseTexas A & M iYunivesithi yacela uluntu ukuba ithumele amabhugs abanga ukuhlalutya. Bathi ingxelo engaphezulu kwama-99% yoluntu malunga neenambuzane ezazikholelwa ukuba ziyamanga izibhanki zazingakhange zibambe izibungulu.
Kukho ezinye iimbumbulu ezibukeka zifana nezimbungulu zokubanga.
Kwakhona kubalulekile ukuqonda ukuba iibhugi zokubanga zivame ukungena kumakhaya anamhlanje . Ii-bugs ze-Triatomine zidibene neendawo ezihlwempuzekileyo, apho amakhaya anesiseko sokungcola kunye nokuntuleka kwesikrini. EU.S., iibhugi zokubamba zihlala zihlala kwiigubs okanye i-coops, kwaye ingaba yinkinga kwiinja zeenja kunye neendawo zokuhlala. Ngokungafani nebhokisi enkulu yegciwane , enye inambuzane ye-Hemipteran enomkhuba omubi wokufumana indlela yayo ezindlini zabantu , ibhu yengqumbo ibambelela ngaphandle.
Isifo Se-Chagas Sihlala e-US
Ngaphandle kwexesha elikufutshane le-"bugly" e-kissing bugs, isifo seChagas sisifo esingaqhelekanga kwi-US I-CDC ilinganisela ukuba kukho abantu abangama-300,000 abathwala isifo seT. cruzi e-US, kodwa ukuba uninzi lwaba bavela kwamanye amazwe ukusuleleka kumazwe apho isifo se-Chagas siphelele (iMexico, Central America, kunye neMzantsi Melika). IYunivesithi yaseArizona iSebe le-Neuroscience libika ukuba kuphela iziganeko ezi-6 zezifo zaseChagas ezithe zatshatyalaliswa kwiindawo zasemzantsi, apho i-Triatomine bugs imiselwe kakuhle.
Ngaphandle kokuba imizi yase-US ihlala ingenakuxhamla ukukrakra izibhugi, kukho esinye isizathu esibalulekileyo sokuba amazinga okusuleleka e-US aphantsi kakhulu. ukufumana isidlo segazi. Ngethuba le-bug ye-kiss ephazamisekile, ngokuqhelekileyo ibanga elincinane kwesikhumba sakho, ngoko ke iifesi ezinama-parasite azidibana nawe.
I-Triatominae ye-Family-Buging Bugs, Bugguide.net. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
I-Chagas Disease, iYunivesithi yase-Arizona Isebe le-Neuroscience. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
Imibuzo ye-Bugat ye-Triatomine, amaziko okuLawula nokuLawula izifo. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
I-Epidemiology kunye neZingozi zobungozi (izifo zeChagas), amaZiko okuLawulwa kweNtsholongwane kunye nokuKhusela. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
Izigulane zokuqhawula kunye neChagas Disease e-United States, e-Texas A & M kwiYunivesithi. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
"Ukuqhawula ama-bugs ( Triatoma ) kunye nesikhumba," ngoRick Vetter MS, iDermatology Online Journal 7 (1): 6. Kufikeleleka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
"Hlalani Ukhulile: Izibilini Zokuqhawula Azingabambi I-US," nguGwen Pearson, Wired.com, Disemba 3, 2015. Kufumaneka kwi-intanethi ngoDisemba 7, 2015.
Ukuphuhlisa umfanekiso ococekileyo wendlela i-Assassin Bugs iguqulwe ngayo, ngu-Iqbal Pittalwala, ngo-Oktobha 25, 2012, i-University of California. Kufikeleleka kwi-Intanethi ngomhla ka-8, 2015.
I-Insect Scale kunye ne-Mealybugs, i-Superfamily Coccoidea
Izigulane ezisezantsi, i-Family Coreidae
Ama-Bugs Assassin, Family Reduviidae
Iimpawu kunye neempawu ze-Bugs True, Order Hemiptera
Umlando weBhanana - Indlu yasekhaya yeZiphumo eziPheleleyo zeJunk
Ulungelelwano lweCuisine e-U
Ngaphantsi kwePar: IiRekhodi zeGolati zamadoda kwiiNtloko
Isikhokelo sokuqala kwiPro Progress - Wrestling 101
5 Iintlobo zeengcambu zengcambu zichazwe
Ukutya - I-Archaeology kunye neMbali yoKubhiyozela ukutya
I-Reflective Pronouns ngesiNgesi